လူအများစုကဆိုဖာကို ၀ ယ်ဖို့မဝံ့မရဲဖြစ်နေတယ်လို့ငါသိတယ်. ထို့ကြောင့်, နှစ်ပေါင်းများစွာပရိဘောဂများထုတ်လုပ်ခြင်းမှအကျိုးရှိသည်, ကျွန်ုပ်တို့ဖောက်သည်များအားအောက်ပါဆိုဖာ ၀ ယ်ခြင်းအကြံပေးချက်များနှင့်မျှဝေနိုင်သည်.
There is no sense in consideringalove seat on the off chance that it doesn't fit you well. သင့်မိသားစုမှလူတိုင်းအတွက်ထိုင်ခုံများသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သင့်သည်. အမှု၌သင်သည်ထိုင်ခုံအိပ်ရာဝယ်ယူရန်, အားလုံးအမျိုးမျိုးသောရာထူးအတွက်နှငျ့ညီညှတျသေချာပါစေ. မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအတွေးသည်ထိုင်ခုံ၏ကြွယ်ဝမှုဖြစ်သည်. လေးနက်သောသို့မဟုတ်တိမ်ပိုင်းထိုင်ခုံများကိုရွေးချယ်ပါ, သင့်အနေအထားပေါ် မူတည်၍ ထိုင်ခုံ၏နောက်ကျောကုလားထိုင်သည်အောက်ခြေထိုင်ခုံ pad ၏ရှေ့သို့သာခြေထောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်ခြေထောက်နှင့်ဒူး၏နောက်ကျောများနှင့်လုံလောက်စွာသင်၏ကျောကိုခိုင်ခံ့စေသင့်သည်. နောက်ထပ်ဘာလဲ, အချစ်ထိုင်ခုံသည်သင်အနားယူလိုသောနေရာဖြစ်ပါက, Lounge ကုလားထိုင်ပေါ်သို့ပြန့်နှံ့သွားပြီး၎င်းသည် napping နှင့်ပျော်ရွှင်နိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ.
Upholstery texture and pads can be supplanted when they get old and worn, သို့သော်, မည်သည့်ဆိုဖာမျှအားကောင်းသောအားဖြင့် မှလွဲ၍ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအိမ်သုံးပစ္စည်းများအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်, အရည်အသွေးအတွင်းပိုင်းထည်. သင်လျောက်ပတ်သောအိပ်ရာတစ်ခုဝယ်ယူဖွယ်ရှိသည်, အစွန်းအကြောင်းကိုရှာတွေ့ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ. စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ခုံတန်းရှည်တွေထဲမှာ particleboard ကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အောက်လိုင်းတွေရှိနိုင်တယ်, ပလပ်စတစ်, သို့မဟုတ်သတ္တု, သို့တိုင်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာထိုင်ခုံသည်ခိုင်မာသောသစ်မာအကြမ်းဖျင်းရှိလိမ့်မည်, an "မီးဖိုခန်းခြောက်" သပိတ်ပင်၏သစ်မာအကြမ်းဖျင်း, ပင်လယ်ကမ်းခြေ, သို့မဟုတ်အပျက်အစီးများ. ထင်းရှူးအကြမ်းဖျင်းကျိုးနွံဖြစ်ကြသည်, သို့သော်, သူတို့သည်ငါးနှစ်အတွင်းသို့မဟုတ်အနီးအနားရှိတစ်နေရာရာတွင်လှည့်ဖျားခြင်း၊. ချစ်ခြင်းမေတ္တာထိုင်ခုံ၏ခြေထောက်များသည်အဖုံး၏အရေးကြီးသောအပိုင်းအစများဖြစ်သင့်သည်. ခြေထောက်များသာကပ်နေပါကဆိုဖာနှင့်မဟာဗျူဟာအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းပါ. ခိုင်ခံ့သောအစွန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာကြမ်းပြင်မှရှေ့ထောင့် (သို့) ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုအမြင့်သို့မြှောက်ရန်ဖြစ်သည်6inches or something like that. In the event that the other front leg doesn't rapidly ascend off the floor, as well, it'sasign the edge is contorting and is in this manner powerless. Any couch that noticeably curves or squeaks under this test is one you ought to stay away from.
A sofa withadecent hardwood outline amassed with dowels or corner sections ought to be quality household items, သို့သော်, it is as yetasmart thought to compellingly test the arms of the couch to ensure they are tight, with no give when you incline toward them. Inafamily with dynamic youngsters, the most well-known region of disappointment onasofa (other than the upholstery) is the arms.
အမှတ်အသားများ (Tags): ဆိုဖာအစုကိုဝယ်ပါ